Soomaaliland oo adkaysay amniga Burco halkaas oo ay shalay ka dheceen rabshado dad ku dhintay – Radio Daljir
Diseembar 24, 2013 1:57 b 0
Burco, December 24, 2013 – Maamulka gobolka Togdheer iyo kan degmada Burco ee Soomaaliland ayaa ka hadlay qalalaaso shalay ka dhacay halkaas oo ay dad ku dhinteen, waxay tilmaameen in la xadidey in ay soo socdaan.
Duqa Burco Maxamed yuusuf Muraad oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay inay dhamaatay xasaradii shalay dhacday, isla markaasna la xakameeyey inay rabashadaha oo khasaare dhaliyey ay sii socdaan.
Wuxuu tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay rabashadaha isagoo kuwa dhaawacana u rajeeyey caafimaad.
Maxamed Muraad oo ah duqa Burco, Yuusuf Xaaji Cabdulaahi gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo Dr. Cabdi Aw-cali oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliland, dhamaantood waxay ka codsadeen dadka reer burco inay xaalada dejiyaan.
Burco waxaa ku dhintay 1 ruux waxaana ku dhaawacmay ilaa 4 kale oo rayid iyo ciidan isugu jira, kadib markii shalay ay dheceen rabashado baaxad leh oo rayidku uga soo horjeeday taliyihii booliska gobolkaas oo xilka laga qaaday.